Microsoft OneDrive 5.36 (Beta 3) Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.36 (Beta 3) လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျကို Microsoft OneDrive နှင့်အတူသွားလေရာရာ၌ ပို. လုပ်ပါ။ ကိုရယူပါနှင့်သင့် Android ကိရိယာ, ကွန်ပျူတာ (PC ကိုသို့မဟုတ် Mac) မှသင်၏စာရွက်စာတမ်းများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုဝေမျှနှင့်သင်အသုံးပြုသည့်အခြား devices များ။ တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်နှင့်မျှမကိစ္စသင်တို့နေရာအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ရုံးမိုဘိုင်း app များကိုသုံးပါ။ Android အတွက်အဆိုပါ OneDrive App ကိုသင်သွားလာရင်းပေါ်မှာဆိုရင်အခါသင်အလွယ်တကူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အလုပ်ဖိုင်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
•အမြန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Word, Excel, PowerPoint နှင့် OneNote တူသောရုံး apps များအတွက် OneDrive ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။
•တစ်ဦး shared စာရွက်စာတမ်း edited အခါအသိပေးချက်များကိုရယူပါ။
• Access ကိုသင့်ရဲ့အရေးအပါဆုံးဖိုင်တွေအော့ဖ်လိုင်း။
သငျသညျစီးပွားရေးအဘို့အ OneDrive အတွက်လက်မှတ်ထိုးရန်အဘို့, သင်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခြေစစ်ပွဲ SharePoint အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် Office 365 ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေးပေးသွင်းအစီအစဉ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအပေါ်-ဝုဏ် directory ကိုတစ်ဦးထံမှ account ကို sign in မရပါဘူး။ ကင်မရာအပ်လုဒ်ကို, ရှာ, မျိုးများနှင့်စီးပွားရေးအကောင့် OneDrive add နိုင်စွမ်းရှိသောအန်းဒရွိုက် 4.0 သို့မဟုတ်နောက်မှအပြေးကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ app ကို Microsoft ကပေးအပ်သည်။ ဒေတာကိုဒီစတိုးဆိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ဒီ app ကို Microsoft မှလက်လှမ်းနှင့်လွှဲပြောင်း, သိမ်းဆည်းထားများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ် Microsoft သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates အဆောက်အဦကိုထိန်းသိမ်းရန်ဘယ်မှာမဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်နိုင်သည်။
Microsoft OneDrive အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Microsoft OneDrive အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Microsoft OneDrive အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Microsoft OneDrive အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.61k 16.2M
Microsoft OneDrive ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Microsoft OneDrive အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.36 (Beta 3)
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457
ဗားရွင္း: 5.36 (Beta 3)
Release date: 2019-07-19 12:15:13
လက်မှတ် SHA1: 81:2A:2A:CE:16:C2:8E:4C:AF:23:F9:7B:90:2E:C8:74:6E:CA:6C:F5
Microsoft OneDrive APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ